NzuzoTools: Ebe nrụọrụ weebụ bara uru ma baa uru maka nzuzo n'ịntanetị | Site na Linux
Nyaahụ anyị nyochara ebe nrụọrụ weebụ a na-akpọ "Nnukwu Isi Iyi Open" onye ịdị mma ya bụ na ọ na-enye ọkaibe na nnukwu Mepee Isi mmalite Ngwa katalọgụ, mgbe taa anyị ga-enyocha ọzọ yiri nke ahụ, mana ebumnuche iji meziwanye nzuzo online nke ndi amaala niile, onye aha ha bu Nzuzo.
Nzuzo bụ ihe bara uru na bara uru website maka nzuzo online, nke n’etiti ọtụtụ elele na-enye ọrụ, ngwaọrụ na ihe ọmụma maka ndị ọrụ iji chebe ha nzuzo megide onyunyo zuru ụwa ọnụ.
Tupu ịbanye n'ụzọ zuru ezu ikwu na weebụsaịtị nke Nzuzo, Okwesiri ighota na n’oge ndi ozo anyi ekwuola okwu banyere saiti ndi ozo yiri ya NoGAFAM, nke anyị na-akọwa na kwuru aga akwụkwọ dị ka ndị a:
"NoGAFAM bụ saịtị na - abụghị naanị na - akwalite sọftụwia efu, kamakwa na - akpali ndị ọzọ ịmara uru data sitere na ịntanetị dị, yana ihe egwu ha na - agba mgbe ha na - eji nyiwe, ngwa na ọrụ nke ọtụtụ ndị Teknụzụ ụwa, ọtụtụ nke akpọrọ GAFAM". NoGAFAM: Weebụsaịtị na-atọ ụtọ na ngagharị maka sọftụwia efu
Mgbe ọzọ gara aga metụtara post, nke anyị na-akwado iji nyochaa ma ọ bụ gụọ maka oge mbụ bụ ihe ndị a:
Ebe anyi nwekwara njikọ nke otutu ndi ozo gara aga metụtara posts na akporo:
Cybersecurity, Nzuzo na Anonymity online.
Ndien ke akpatre, ndị na-esonụ ga-doo anya, ihe okwu na-anọchi anya GAFAM:
1 NzuzoTools: Ebe nrụọrụ weebụ maka nzuzo nzuzo
1.1 Gịnị bụ NzuzoTools?
1.2 Akwadoro maka Nzuzo Ntanetị ịntanetị
NzuzoTools: Ebe nrụọrụ weebụ maka nzuzo nzuzo
Gịnị bụ NzuzoTools?
"A na-ele gị. Ndi ulo oru nke onwe ha na ndi nke goomenti kwadoro na enyocha ma deko ihe omume gi na netwok. nzuzotools-en na-enye ihe ọmụma na ngwaọrụ iji kpuchido nzuzo gị megide nlekota ụwa site n'aka ndị ọrụ. Anyị na-eme ka ndị na-eche echiche nzuzo dị ka gị iji kwurịta ma mụta banyere ọganihu ọhụrụ na ichebe data gị n'ịntanetị. Weebụsaịtị a bụ ebe etiti nzukọ anyị, ebe anyị nyocha ma kwado ihe ngwanrọ dị iche iche maka obodo anyị."
N'etiti isi ihe dị na weebụ anyị nwere ike ịkọwa isi ihe ndị a:
Nghọta na ọdịnaya enyere iji nweta ndụmọdụ siri ike na ntụkwasị obi.
Ha bụ nzukọ na-enweghị ego.
Ha na-emesi ndị ọrụ obi ike na a naghị akwụ ụgwọ ha ma ọ bụ n'okpuru mmemme mmemme.
Ego gị bụ ndị nyere gị na ndị na-akwado gị.
Ọrụ ha bụ ịgbasa agụmakwụkwọ nzuzo na ịkwalite ọrụ ntanetị dị ka Mastodon, Matrix, na WritFreely.
Akwadoro maka Nzuzo Ntanetị ịntanetị
Weebụsaịtị a nwere ihu ọma, n'ọtụtụ ihe, nke na-enye ndụmọdụ ya ọrụ, ngwaọrụ na ihe ọmụma n'okwu nke nzuzo online, na-ekewa ha Ngalaba 5 ndị bụ:
Ọrụ nke onwe
Ọ bụ ezie na ya interface dị Asụsụ Bekee, o nwere enyo saịtị en Asụsụ Spanish, Na-esote njikọ. Site ugbu a gaa na e nwere na-akpali ngagharị nke a website na-uru nke niile ihe ọmụma na ubi nke nzuzo online na ọ na-enye.
N'ikpeazụ, dị ka ndị ọzọ anyị na-akwado ịgagharị ndị a njikọ njikọ iji mee ka ihe ọmụma anyị sikwuo ike n'akụkụ dị otú ahụ dị mkpa nke Nche nke ozi na / ma ọ bụ Nche IT:
Njikọ bara uru na Nchebe Kọmputa.
Nchịkọta Nchedo data ma ọ bụ nyocha onyoguzogide akwụkwọ ntuziaka.
Anyị na-atụ anya nke a "bara uru obere post" banyere «PrivacyTools», weebụsaịtị bara uru na nke bara uru maka nzuzo online, nke n’etiti ọtụtụ elele na-enye ọrụ, ngwaọrụ na ihe ọmụma maka ndị ọrụ iji chebe ha nzuzo megide onyunyo zuru ụwa ọnụ; bụ nnukwu mmasị na ịba uru, maka ihe niile «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» na nke onyinye dị ukwuu na mgbasa nke obibi dị ebube, gigantic na eto eto nke ngwa nke «GNU/Linux».
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Noticias » NzuzoTools: Ebe nrụọrụ weebụ bara uru ma baa uru maka nzuzo n'ịntanetị
Tim Berners-Lee, nna nke Web ahụ, na-akwadebe ọrụ ọhụrụ